आफ्नो कार्यकालमा जनताले चाहे अनुरुप काम गर्छुः चौधरी
बिक्रम थापा जेठ २६, २०७६
जनताको चाहना पूरा गर्न विकासे काम अगाडि बढाएका छौं । जनताको प्रतिक्रिया कामको आधारमा राम्रै आइरहेका छन् । जनताको चाहना असिमित छन् । तर, बजेट सिमित र थोरै छ । जनताको चाहना र अपेक्षा अनुसार काम नहुनु स्वभाविक हो । पुरा पढ्नुहोस्
त्रिवि सेवा आयोग खारेजीको माग गर्दै १९ दिनदेखि अनशनमा विद्यार्थीः आयोग मौन त्रिवि सेवा आयोगको परिक्षा प्रणाली निष्पक्ष नभएको भन्दै रिले अनसन सुरु गरेका विद्यार्थीहरुले आफ्ना मागहरुबारे आयोग र सरकार गम्भिर नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । जेठ २४, २०७६
१४ जिल्लामा हतियारसहित विप्लवका लडाकु ! जेठ २३, २०७६
संखुवासभाको घोर्ले झरनाः जोसुकैको मन लोभ्याउँछ (फाेटाेसहित) जेठ २३, २०७६
करोडौंको जैतुन खेरः व्यवस्थापन र प्रशोधन अभाव जेठ २३, २०७६
राँगागाडाको युगमा भद्रपुर नाका ! दुई देशबीचको नाकामा आजको एक्काइसौं शताब्दीमा राँगागाडीमा सामान ओसारपसार गर्नु व्यापारीहरुको रहर होइन । भारत विहारको गलगलिया र नेपालको भद्रपुर जोड्ने मेची नदीमा हालै निर्माण गरिएको पक्की पुल सञ्चालनमा आए पनि भारतले आफ्नो भागतिरको ४०० मिटर बाटो नबनाइदिँदा ढुवानीका लागि ट्रक, जिप, ट्र्याक्टर जस्ता साधन प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सामान ल्याउनै पर्ने बाध्यताका कारण व्यापारीहरुले पहिल्यैदेखिको राँगागाडी रोज्न बाध्य भएका हुन् । जेठ २२, २०७६
विकासका आधारशिला तयार गरेर अघि बढेका छौं : शाही हाम्रो लक्ष्य भनेको कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायिकीरण र ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने काम हो । तुरुन्तै औद्योगिकीरण गर्ने तर्फ लगियो भने बजारको समस्या हुँदैन र त्यस अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढिराखेका छौं । जेठ १९, २०७६
यस कारण विप्लवको पार्टीमा लागेर मर्न तयार हुन्छन् लडाकु ! अयोग्य लडाकूको परिभाषा दिएर अपमानित गरेको उनीहरुले बताउँदै आएको छन् । उनीहरुले शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरुलाई नै हतियार बोकाएर लड्न लगाउनेले अयोग्य भनेर अपमानित गरेको भन्दै पूर्व लडाकु लेनिन् विष्टले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नै गुहारीरहेका छन् । जेठ १८, २०७६
दुई अध्यक्षको अभिव्यक्तिले नेकपामा संकट यसले के फरक पार्छ राजनीतिमा दुई या तीन वर्ष बस्दा । नेकपाको बहुमत छ, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उनले थपे, ‘देशको विकास नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ ? भन्ने कुरा नगर्ने, स्थिरता र स्थायीत्व कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टी नजाने ? अनि हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्ने, नकात्मकता फलाउनुपर्ने किन हो ? मलाई आश्चार्य लाग्छ । जेठ १८, २०७६
बजेट प्रभावकारी, कार्यान्वयनमा चुनौती नेपालकै इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सन्तुलित आएको छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा अझै आक्रमक रुपमा हुनुपर्नेमा निरन्तरता देखियो, तर भौतिक विकास सामाजिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रमा जोड़ छ । जेठ १७, २०७६
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया, के भन्छन् अर्थविदहरु ? सरकारले ल्याएको बजेट कनिका छराई मात्रै ... जेठ १५, २०७६
१८ दिनदेखि अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा, किन मौन छ सरकार ? उनीहरूले विद्यालयमा शिक्षकविना विद्यार्थी पढ्न नपाउने स्थितीबाट मुक्त गराउन सरकारसंग माग गरे । उनले अस्थायी शिक्षकले गरेको आमरण अनसको विषयमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आक्रोश पोखे । जेठ ६, २०७६
प्रि–बजेट छलफलः समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? यसो भन्छन् अर्थविद्हरु जेठ ६, २०७६
ओडारबाट घर फर्किदाको खुशीमा मान्ठ रामायणका मुख्य पात्र राम १४ बर्ष बनबास बसेर राम राज्य प्राप्ती गरेको कथन हामी सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । अहिले बाजुराका गरीबहरुमा बर्षौदेखि ओडारको बासबाट उन्मुक्ति पाउँदाको खुशीको सीमा छैन । जेठ १, २०७६
पूर्वाधार विकासको पर्खाइमा शुद्धोधन दरवार राजा शुद्धोधनको दरवारलाई भारतले पछिल्लो समय आफ्नो देशमा नै राजा शुद्धोधनको दरवार भएको भन्दै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ । उसले भारतको कपिलबस्तु दरवार भन्दै निर्माण तथा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भने कुनै चासो नाराख्नुलालाई स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् । बैशाख २८, २०७६
तरकारीमा विषादी जाँच्ने निकाय नै विरामी बैशाख २८, २०७६
सोलार बत्ती नबल्दा अन्धकार बन्यो ६ लेनको सडक बैशाख २४, २०७६
सर्वसाधरणले संविधान दिवस हेर्न पाएनन्